Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseSingapore | Ukuthengisa Kuholela | Database lakamuva Lokuposa
Uhla lwezinombolo zocingo lwaseSingapore
Database lakamuva Lokuposa » Uhla lwezinombolo zocingo lwaseSingapore
Izinombolo Zocingo zase-Singapore
Uhlu lwethu lwezinombolo zocingo lweSingapore lunemininingwane efanelekile ongayidinga yemikhankaso yakho yokubekisa nge-B2C. Ukuqoqa nokuqinisekisa i-database yefoni yase-Singapore kungaba ngumsebenzi osindayo, ngakho-ke sikwenzile lo msebenzi!
Ithimba lethu labashintshi bedatha lihlanganile i-database yeselula efakwe ngaphambilini efakwe ezweni, lapho ungafinyelela khona izilaleli ezihlosiwe ozithandayo.
Thenga iSystem Consumer People Ucingo Ucingo
Uhlu Lwezingcingo lwabathengi baseSingapore
Ukutholela ipulatifomu efanelekile yohlu lwefoni labathengi baseSingapore bese iDatabase Yeposi Lamathupha noma i-Latestdatabase.com ingakwenzela. Isayithi elinokwethenjwa kakhulu ekunikezeni izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi oluwusizo olukhulu lokuthengisa izingcingo, ukumaketha kwe-sms kanye nokubiza okubandayo ukwaneliseka kwebhizinisi lakho.
Ukukhetha, uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseSingapore luyidatha eqinisekisiwe kunazo zonke ongayethemba ukuthi isebenza ngempumelelo ngocingo kanye nangendlela ephumelelayo yokukholisa iklayenti lakho ukuthi lithenge imikhiqizo yakho nge-snap nje. Ukukunikeza imininingwane efanelekile evela kubasebenzi bethu bedijithali abanolwazi ukukwenza waneliseke.
Uhlu lwabathengi bezingcingo zabathengi baseSwitzerland noma uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi olusuka kuDesktop Yokuposa Yamahhala noma i-latestdatabase.com iqukethe amarekhodi aphelele angama-80,000 ohlu lwabathengi abafinyelela ku-$ 800, ngokukhokha ngesikhashana esithile kanye nesoftware etholakalayo esheshayo engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV. Izindlela zokukhokha eziyikhadi le-visa, ikhadi le-master, i-paypal, i-skrill, inyunyana yasentshonalanga namakhadi amaningi namadivayisi wokukhokha kalula.
Ukuthenga, Uhla lwezinombolo zocingo lwabathengi baseSwitzerland kusuka eDatabase nge-Mailing yakamuva noma ku-Latestdatabase.com, kuyindlela esebenzayo kunazo zonke ongayisebenzisa ebhizinisini lakho, noma ngabe kungokwentengiselwano, ukumaketha ngemiyalezo ye-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza ngokuba namakhasimende okuqondiswe okulungile akwenze ube ngaphezulu isebenza ngempumelelo yebhizinisi lakho.
I-Singapore Nombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo